Dr. Tint Swe's Writings: July 2017
မြန်မာပြည်မှာ မီးများစဉ်က မီးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ရေများပေမယ့် ရေမနိုင်သေး။ မီးစတဖက် ရေမှုတ်တဖက်တွေ များနေသေးတယ်။ ဝါဆိုဝါခေါင် ရေဖောင်ဖောင်မှာ ရေသာများ၍ ငါးမတွေ့ကြပါ။ သောင်မတင် ရေမကျအဆင့်သာရှိသေးတယ်။ ရေမနောက် ကြာမလျှောက်လို့ အောက်မေ့ကြပါ။ မိုးရွာတုန်း ရေခံကြပါ။ အချိန်နှင့် ဒီရေဟာ လူကိုမစောင့်ပါ။ တဦးနဲ့တဦး ကုန်းပေါ်ရောက်မှ ရေမမွန်းစေနဲ့။ ရေတိမ်နစ်တဲ့ဘဝတွေ အမျှဝေ။ ရေကိုခြားသော် အကြားမထင် ချစ်ခင်ကြစေ။ ရေလိုအေး ပန်းလိုမွှေးကြစေ။ စီးတဲ့ရေ ဆယ်တဲ့ကန်သင်း စည်းကမ်းရှိကြလေ။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ဆီကိုရေချိုး ဆေးရိုးမီးလှုံခေတ်ကို နည်းနည်းလေးတော့ ကြုံခဲ့တယ်။ နောက်တော့ ရေကြည်ရာ အရပ်ကနေခွါ မြက်နုရာအရပ်တွေ ရှာနေရတယ်။ နတ်တို့ဖန် ရေကန်အသင့် ကြာအသင့်လို ကံမကောင်းပါ။ ဖောင်စီးရင်း ရေငတ်တဲ့အခါတွေ ရှိခဲ့တယ်။ သဲထဲရေသွန်တော မဖြစ်ပါ။ ခဲလေသမျှ သဲရေကျမဖြစ်ပါ။ ရေစီးတခါ ရေသာအလှည့် မကျနိုင်ပါ။ ရှိပါစေလေ့့
ပြည်သူပြည်သားတွေ ပိန်းကြာဖက်တွင် ရေမတင် ရောဂါဘယတွေ ကင်းစင်ကြပါစေသတည်း။
ည (မနက်) ၁ နာရီ၊ ၂၇ မိနစ်။
Yamuna Clinic and Burma Center Prague ယမုန်နာဆေးခန်း
မြို့သာမှာ ဆေးခန်းဖွင့်တော့ မုံရွာကဆေးခန်းက ဟောင်းသွားတယ်။ စစ်ကိုင်းမှာ ဆေးခန်းဖြစ်လာတော့ အဲတာလည်း အဟောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ပုလဲမှာ ဆေးခန်းဖွင့်ပြန်တော့ အဲတာတွေအားလုံး ဟောင်းသွားတော့တယ်။ ဒေလီမှာ ယမုန်နာဆေးခန်းဖွင့်တဲ့အခါ အဟောင်းတွေကို အကုန်သတိရတယ်။
အခုတော့ ဆေးခန်းတိုင်းဟာ သမိုင်းဖြစ်ကုန်ကြပြီ။
Photo taken by Nuam No shows Burma Center Prague visiting Yamuna Clinic on 31-7-2014
8888 and I ရှစ်လေးလုံး နဲ့ ကျွန်တော်
သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက်၊ သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက် ဆိုတဲ့သံပြိုင် ဟစ်ကြွေးသံတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်အိပ်ယာက နိုးလာခဲ့တာဟာ ၈-၈-၁၉၈၈ မနက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကြီးဆုံးသားနဲ့အတူ ထားဝယ်သတ္တုတွင်း တည်းခိုရိပ်သာမှာ တည်းခိုနေကြရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဆရာဝန် ဖြစ်ကတည်းက အညာဒေသခေါ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲမှာသာ တောက်လျှောက် တာဝန်ကျနေရာကနေ ထားဝယ်မြို့နယ်၊ ဟိန်းဇဲသတ္တုတွင်းဆရာဝန်အဖြစ် ရွေ့ပြောင်းခံရလို့ တာဝန်ထမ်းနေခဲ့တာ တပါတ်တိတိသာရှိပါသေးတယ်။
သားအဖနှစ်ယောက် ထားဝယ်မြို့ထဲ လျှောက်ကြည့်ကြတယ်။ လူပေါင်းထောင်ချည်တဲ့ ဆန္ဒပြနေသူတွေထဲ ရောက်သွားလိုက်ကြ၊ ဘေးကနေလိုက်လိုက်ကြ။ ထားဝယ်စကားကိုနားမလည်ပေမဲ့ ဖြစ်နေတာတွေမှန်သမျှ ဘာသာပြန်စရာမလိုဘဲ သိပါတယ်။ တနေရာမှာတော့ အလှူခံလူငယ်တယောက်ရဲ့ ခွက်ဖလားထဲကို အကြီးဆုံး ပိုက်ဆံစက္ကူတရွက် ထည့်လှူလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ ရှစ်လေးလုံးအတွေ့အကြုံဆိုတာ ဒီလောက်သာရှိတယ် ပြောရမလားမသိပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစုတခုလုံးကိုတော့ ရှစ်လေးလုံးအဖြစ်သနစ်ကြီးကနေ မထင်မှတ်တာတွေ၊ မမျှော်မှန်းတာတွေဟာ တသက်တာအတွက် ဆက်တိုက်ဖြစ်လာစေဘို့ သန္ဓေပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေက အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲလာနေပါပြီ။ (မဆလ) အစိုးရဘယ်လိုမှ လုပ်မရတော့ပါ။ ထားဝယ်လူထုကိုကြည့်ပြီး၊ အလုပ်ခွင်ရှိရာ ဟိန်းဇဲသတ္တုတွင်းကို ပြန်မသွားတော့ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းလေးတွေ ဒီအတိုင်းထားခဲ့တယ်။ အစိုးရအလုပ်ဆိုတာလည်း ကမ္မသကာ။ လစာ၊ ပြောင်းရွေ့ခရီးစရိတ်လည်း နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး။ ကိုယ်လိုပဲ ရှစ်လေးလုံးကနေ ဘဝတွေကို သွက်သွက်ခါ အပြောင်းခံရသူတွေ ထုနဲ့ဒေး ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထားဝယ်ကနေ မိသားစုရှိရာ မုံရွာ-ပုလဲပြန်ဘို့ ရန်ကုန်ကိုလေယာဉ်စီးပြီးမှ မီးရထားနဲ့ သွားရမယ်။ ထားဝယ်ကနေ လေယာဉ်မထွက်တော့ပါ။ လေဆိပ်ကို ၃-၄ ရက် သွားသွားစောင့်ကြရတယ်။ လေယာဉ်ကို လှမ်းမြင်နေရပေမဲ့ အောက်မဆင်းလို့ ပြန်လာရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ထိုင်ခုံနှစ်နေရာရလို့ မြန်မာ့လေကြောင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်ကနေ မြို့ထဲသွားဘို့ တက်စီမရှိပြန်ပါ။ ဟိုမေးသည်မေး၊ နောက်ဆုံး ကားကြုံတစီးရပါတယ်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးမှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေကနေ ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့သလဲလို့ မသိနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက လူမသိအောင်နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ရိုးစင်းတဲ့လူတွေကလဲ လူမသိအောင် အချင်ချင်းရိုင်းပင်း ကူညီခဲ့ကြတယ်။
တည်းခိုမဲ့ စမ်းချောင်းရောက်အောင် သစ်ပင်တွေ၊ အတားအဆီးတွေ အများကြီးကို ကျော်လွှားကြရတယ်။ တည်းမဲ့အိမ်က မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးတဦးအိမ်။ တခြားအဆင်ပြေတာက မရှိပါ။ ကျွန်တော်က မနက်နဲ့ ညနေတိုင်း အိမ်ရှေ့ဝရန်တာ ထွက်ပြီး နေရှင်နယ် ဓါတ်ခဲ ၂ လုံးသုံးရေဒီယိုကို လက်ကမချအောင် သတင်းနားထောင်တယ်။ BBC နဲ့ AIR က အဲဒီကာလမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးပါ။ ရေဒီယိုနားထောင်တာမှန်ပေမဲ့ စစ်ဗိုလ်အိမ်မှာတည်းနေတာမို့ လမ်းပေါ်ကလူတွေက ထောက်လှမ်းရေးလား အထင်မှားကြတာကိုသိလာတော့မှ ဆင်ခြင်ရပါတော့တယ်။
ရန်ကုန်-မန္တလေးမီးရထားလည်းမပြေးပါ။ ၄-၅ ရက်စောင့်ရပြီးမှ ရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ၁၅ နှစ်တိတိတာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ အစိုးရအလုပ်ကို တကယ့်ဖေါင်ဖျက်သလို နောက်ကြောင်းမကြည့်တော့ပဲ မိသားစုရှိရာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့ကို ပြန်ရောက်ပါတော့တယ်။ ခေတ်ပျက်ကြီးထဲမှာ မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းဆုံနိုင်တာပါ။ အဲလိုပြန်လည်ပေါင်းဆုံးမှုမျိုးတွေကို နောင်မှာ ထပ်ခါထပ်ခါကြုံရပြန်ပါတယ်။ အဲလိုဖေါင်ဖျက်ရတာ သည်တခါတည်းသာမဟုတ်တာကို နောက်မှသိရပါတယ်။
မြို့က သေးပေမဲ့ ပုလဲမှာလည်း ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေကနည်းတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ မသိမရှိပါ။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါ လမ်းပေါ်ထွက်အော်တယ်။ ကျွန်တော်က အစိုးရအလုပ်က မထွက်ရသေးပါ။ ဆန္ဒပြသူတွေအတွက် ကိုယ့်ဖါကိုယ် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့လုပ်ပြီး ကူညီရပါတယ်။ နောက်တက်လာတဲ့ စစ်အစိုးရကနေ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ကို သူတို့ရဲ့ အရံအင်အားအဖြစ် အသုံးချခဲ့တာကို တွေ့မြင်ရတော့ အတော်စိတ်နာပါတယ်။
သားတွေကလည်း သူတို့နည်းသူတို့ဟန်တွေနဲ့ လုပ်ကြတာ။ မခိုင်းရပါ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဘယ်သူကမှ လာမခိုင်းပါ။ စစ်အစိုးရကနေဝါဒဖြန့်တဲ့ ရှစ်လေးလုံးဖြစ်အောင် နောက်ကနေသွေးထိုးသူဆိုတဲ့ (ဗကပ) ဆိုတာကို ကျွန်တော် တစွန်းတစမှ မသိသေးချိန်ကပါ။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပါပြီ။ NLD ဖွဲ့ပါပြီ။ ဆရာမောင်သော်က ပုလဲအထိရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် အစိုးရဆရာဝန်အလုပ်က မထွက်ရသေးလို့ သူ့စကားဝိုင်းမှာ မပါနိုင်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပုလဲမှာ NLD ဖွဲ့ဘို့လုပ်ကြတော့ ကျွန်တော့်အိမ်က လူမသိစေတဲ့ဌာနချုပ် ဖြစ်လာပါတယ်။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော် ၂၄ နှစ်ကြာခိုအောင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ထွက်ခွါရပါတယ်။
အစိုးရဝန်ထမ်းမှန်သမျှ အရင်က (မဆလ) ထဲမဝင်ရင် ရာထူးမတိုး၊ ပစားမပေးခဲ့ရာကနေ ရှစ်လေးလုံးတန်ခိုးနဲ့ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရ ဖြစ်လာပါတယ်။ (မဆလ) ကံမကောင်းပေမဲ့ ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် အစိုးရအလုပ်ကနေ ထွက်တဲ့။ အဲဒီခေတ်မှာက ဆရာဝန်အလုပ်ရဘို့ထက် ထွက်ဘို့က ပိုခက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကိုဆင်းပြီး ကျန်းမာရေးဦးစီးညွှန်ချုပ်ရုံးသွား အလုပ်ထွက်စာတင်ပါတယ်။ တပါတ်သာကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ထွက်ခွင့်ရပါတော့တယ်။ ဒီအတွက်တော့ ကျေးဇူးပါ စစ်အစိုးရခင်ဗျား။
ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းကြီးကနေ NLD ကိုဖွဲ့စည်းစေဘို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအမှန်ပါ။ ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းနဲ့ NLD မှာ ဆင်တူတာတွေရှိပါတယ်။ လူပေါင်းစုံပါတယ်။ ပညာအခြေခံအမျိုးမျိုး၊ ပရိယေသနအမျိုးမျိုး၊ အတွေးအမြင်အမျိုးမျိုး၊ လိုအင်ဆန္ဒအမျိုးမျိုးတွေ လာပြီးစုဝေးတဲ့နေရာအတူတူဖြစ်တယ်။ ၂၅ နှစ်အကြမှာအထိသံမှိုနှက်ထားသလိုဆက်ပြီး မြဲခိုင်နေသူတွေ ရှိသလို၊ ဘဝအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်ကျော်ပြီးသကာလ ရောက်ရာကနေ ဆက်ပြီးသံယောဇဉ်ကြီးနေသူတွေ ရှိတယ်။ ဖါသိဖါသာသမားတွေလည်း မရှားပါ။ အချိန်ကာလဒဏ်၊ နိုင်ငံရေးဒဏ်တွေ ထုထောင်းခံရလို့ ကျေမွသွားသူတွေ၊ ပန်းပဲဖိုမှာ မီးထဲကဆယ်ပြီး ပေပေါ်မှာထုရိုက်ထားလို့ သံကောင်းကောင်းတွေ ဖြစ်လာသူတွေလဲ မနည်းပါ။ သေခွဲခွဲသွားကြရသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။
NLD မှာ မျိုးဆက်သစ်တွေ မနည်းမနော ရှိလာပါပြီ။ ရှစ်လေးလုံးဆိုတာတော့ အသစ်မဖြစ်ပါ။ အဟောင်းသည်သာ သမိုင်းရေးသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သမိုင်းကောင်းအမွေ ဆက်လက်ပေးနိုင်ကြပါစေ။
Severe Cystocele ဆိုးတဲ့ ဆီးအိမ်ကျခြင်း
မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန့်တော့်အဖွားက အသက် ၇ဝ ရှိပါပြီ။ အဲလိုဆီးအိမ်ကျလို့ ဆီးသွားရင် မမနေရတယ်။ မနေတတ်ဘူးဆိုလို့့ ဆေးခန်းမှာ မနှစ်က သားအိမ်ထုတ်ပြီးသော်လည်း ဆေးရုံကဆင်းပြီး ပြန်ပြီး မမနေရပြန်တော့ ဆေးခန်းပြန်ပြပြီး ရာဘာကွင်းထည့်ရပါတယ်။ ပြန်ကျွတ်ကျလို့ ဆိုဒ်ကြီးပြောင်းပြီးထည်သော်လည်း ၂ ရက်အများဆုံးခံပြီး ကျွတ်ကျသွားပါသည်။ ၃ ကြိမ်မြောက်တွင် ဒီတခေါက် ကျွတ်ကျလျှင် လက်ကောက်ထည့်ရမည်ဆို၍ ကျွန်တော့်အဖွား ဆေးခန်းခေါ်မရတော့ပါ။ ယခုအရင်အတိုင်း ဆီး၊ဝမ်းသွားလျင် မမ၍သွားနေပါသည်။ သူကတော့ရတယ် ပြောသော်လည်း ကြောက်၍လားမသိ၊ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ၍ ဆရာအကြံဥာဏ်လေးများကူညီပါခင်များ။
ဆီးအိမ်ကျတာက သားအိမ်ကျတာမဟုတ်ပဲ Anterior prolapse ရှေ့ပိုင်းကျွံတာဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ်ကုသနည်းကို ရေးပြီးပြီ။ ခွဲနည်းအပြင် ဘယ်လိုကုသမလည်းက ဘယ်လောက်ဆိုးသလည်းအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ သားအိမ်ပါကျနေသလား။ အသင့်အတင့်သာဆိုးရင် ဆေးကုဘို့မလိုလောက်ပါ။
၁။ Kegel exercise ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
၂။ Vaginal pessary ပက်ဆရီခေါ် ပလပ်စတစ်-ရာဘာကွင်းထည့်ထားနိုင်တယ်။ ဗဂျိုင်းနားထဲမှာ ထည့်ပေးထားရင် ဆီးအိမ်ကိုပင့်တင်ပေးနေမယ်။ အနေတော်တာတော့ ရွေးသုံးရတယ်။ ခွဲဘို့မသင့်သူတွေကိုလည်း ဒီနည်းသုံးစေတယ်။
၃။ Stress incontinence ဆီးမလုံတာပါရှိနေရင် အားစိုက်မှုလုပ်တိုင်း ဆီးတစက်တစက်ထွက်နေမယ်။ Urethral suspension ခွဲစိတ်နည်း Retropubic suspension surgery လို့ခေါ်တာလုပ်နိုင်တယ်။ ဆီးအိမ်လည်ပင်းနေရာနဲ့ ဆီးသွားပြွန်ကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ Laparoscopic surgery ကရိယာသုံးနည်းလည်းလုပ်တယ်။ ဗိုက်ကနေခွဲရင် Burch colposuspension နည်းကိုအသုံးများတယ်။ ဗဂျိုင်းနာနံရံကို ဆီးစပ်ရိုးနောက်နားမှာရှိတဲ့ Cooper's ligament နဲ့ တွဲချုပ်ပေးတယ်။ ခွဲပြီးနောက် ဆီးပိုက် ၁ဝ ရက်လောက် ထည့်ထားပေးမယ်။
၄။ Estrogen therapy အီစထိုဂျင်ဟော်မုန်းပေးနည်လည်းရှိတယ်။ ဗဂျိုင်းနားထဲထည့်တဲ့ခရင်၊ သောက်ဆေး၊ ဆေးကပ်ခွါနဲ့ ကွင်းတွေရှိတယ်။ သွေးဆုံးပြီးသူတွေကို သုံးစေတယ်။ သွေးဆုံးမှာ ခံစားရတာတွေ (မျက်နှာနီမြန်းတာ၊ ညချွေးထွက်တာ၊ ဗဂျိုင်းနာခြောက်တာ၊ ယာ.တာ၊ အနေရခက်တာ) တွေကိုလည်း သက်သာစေမယ်။ Osteoporosis အရိုးပါးတာလည်းသက်သာစေတယ်။ ဟော်မုန်းနည်းနည်းပေးနည်းလည်းသုံးတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေတော့ ကြည့်ရတယ်။ နှလုံးရောဂါ၊ ဆထုပ်ရတာ၊ သွေးခဲတာနဲ့ ရင်သားကင်ဆာ။
၅။ ဝမ်းချုပ်လို့ ညှစ်ရတာ၊ အလေးအပင် မတာ၊ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေ၊ ရီမောတဲ့ အခါမျိုးတိုင်းမှာပါ တင်ပါးဆုံရိုးကွင်းထဲက အင်္ဂါတွေကို ထိန်းပေးထားရမယ်။ လက်လွတ်စပယ် မလုပ်ပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆောင့်ကြောင့် မထိုင်ပါနဲ့။ အိမ်သာသုံးတာမှာ ဒူးကို ၉ဝ ဒီ၈ရီ ထားလို့ရတာမျိုးသာသုံးပါ။ ပက်လက် အိပ်နေရင်း ခြေထောက် မြှောက်တာကို ၂ ဖက်လုံး တပြိုင်တည်း မလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်ရရင်လည်းသတိရှိပါ။ မတ်တပ်ရပ်နဲ့ ခြေ ၂ ဖက်ဆန့်ပြီး ခါးကုံးတာမျိုး ဆင်ခြင်ပါ။ အထဲကအင်္ဂါတွေကို တွန်းထုတ်သလို မဖြစ်စေနဲ့။ ဆီးသွားတာကို တကယ် ဆီးအိမ်တင်းနေမှသာသွားပါ။
ဝမ်းမချုပ်ပါစေနဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းနုတ်ဆေး ခဏခဏမသောက်ပါနဲ့။ သင်္ဘောသီး၊ မန်ကျီးသီးမှည့်နဲ့ ဝမ်းသွားအောင် လုပ်ပါ။ ဝမ်းနုတ်ဆေးသောက်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဝမ်းပျက်လို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အရက်နာကျတာဖြစ်ဖြစ် ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ် နည်းစေတယ်။ ကြွက်သားတွေ အားပြော့မယ်။ ဓါတ်ဆားရည်သောက်ပါ။ ရေနွေးကြမ်းသောက်ပါ။ အုန်းရည်သောက်ပါ။ ငှက်ပျောသီး၊ လိမ်မော်သီးစားပါ။ လိုအပ်ရင် ပိုတက်ဆီယမ်ဆေးသောက်ပါ။
Kegel Exercise for Women (ကီဂယ်လ်) လေ့ကျင့်ခန်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/kegel-exercise-for-women.html
Severe Cystocele ဆိုးတဲ့ ဆီးအိမ်ကျခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/severe-cystocele.html
Uterine prolapse သားအိမ်ကျတယ်ဆိုတာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/uterine-prolapse.html
တက္ကသိုလ် ပညာပဒေသာစာစောင် သတ်ပုံ
၁၉၆၈ ခု အောက်တိုဘာ
အတွဲ ၃၊ အပိုင်း ၄
အကယ်၍ ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းများသည် ဓာတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းတွင် ကဏ္ဍတခုတည်း၌ ပါရှိနေကြလျှင် ယင်းဓာတ်ပြုဖြစ်စဉ်မျိုးကို တသားတည်းဓာတ်ကူခြင်းဟုခေါ်သည်။ တဖန်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများသည် ဓာတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌ ကဏ္ဍကွဲပြား၍ တည်ရှိနေလျှင် ယင်းဓာတ်ပြုဖြစ်စဉ်ကို တသားတည်းမဟုတ်သော ဓာတ်ကူခြင်းဟုခေါ်သည်။
Healthy Babies ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးတွေအကြောင်း
၃၁-၇-၂ဝ၁၅ နေ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်၊ အင်ဒီယာနာပိုးလစ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ အင်ဒီယာနာပိုးလစ် ကျန်းမာသောကလေးများခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ စကားပြောရတယ်။
ဒီကိုရောက်နေတဲ့ ချင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ကလေးတွေအကြောင်းတော့ ဒီကပညာရှင်တွေနဲ့ ချင်းကွန်မြူနတီ ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောကြပါတယ်။ သူနာပြု ချင်းအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနဝန်ထမ်း ချင်းအမျိုးသမီး တယောက်နဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတယောက်တို့လည်းတက်ရောက်ကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှု၊ မီးဖွါးခြင်းနဲ့ ကလေးသေဆုံးမှု၊ အလေးချိန်နည်းမွေးတာ၊ စောမွေးတာနဲ့ မိခင်နို့တိုက်တာတွေကို ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ပြတယ်။ ကလေးကိုမိခင်တွေက နို့တိုက်နှုန်းကလွဲရင် တခြားလူမျိုးကိုယ်ဝန်တွေထက် နိမ့်ကျနေတာတွေ့ရတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ပြည်တွင်းဆရာဝန်လုပ်ရတုံးကနဲ့ ပြည်ပမှာမြန်မာဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွေ့အကြုံတွေကို ပြောတာပါ။ ပြည်တွင်းက မြန်မာကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ ပြည်ပမှာ ချင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မမွေးခင်၊ မွေးစဉ်နဲ့ မွေးပြီး ကြုံတွေ့ရတာတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်းမြန်မာလူမျိုးကိုယ်ဝန်စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ချင်းအမျိုးသမီး ကိုယ်ဝန် စောင့်ရှောက်မှုမတူပါ။ ဒါ့ပြင် နိုင်ငံတကာ ဆေးသုတေသနတွေထဲမှာ ပါတာတွေနဲ့လည်းကွဲပြားတယ်။
သုတေသနလုပ်ချိန်နဲ့ လုပ်စရာလိုအပ်ချက်တွေ မပြည့်စုံပေမယ့် သိသာတဲ့ခြားနားမှုတွေရှိတာကို ပြောပါတယ်။ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေက နို့နာပေါက်တာများပြီး ချင်းအမျိုးသမီးတွေကနည်းတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာ အူကျတာနဲ့ မုတ်ရောဂါ များသလောက် ချင်းကလေးတွေမှာ မများပါ။ ဒါပေမယ့် ပန်းငုံတာနဲ့ အပျိုမှေးလုံးဝပိတ်တာ ပိုများတယ်။
ဒေလီမှာ ရိုးရိုးမွေးပေးနိုင်တာများတယ်လို့ပြောတော့ ဆွေးနွေးပွဲတက်တဲ့ အမေရိကန်သားဖွါးအထူးကုဆရာဝန်တဦး (သူက မြန်မာပြည်ကို တခေါက်ရောက်ဖူးတယ်) ကမေးလို့ ဘာကြောင့် ခွဲမွေးနည်းသလည်းကို ရှင်းပြရသေးတယ်။ ဆရာဝန်က စိတ်ရှည်၊ သီးခံပြီး၊ အချိန်ပိုပေးရတယ်။ စိုးရိမ်စရာတွေကိုသိပေမယ့် တာဝန်ယူလုပ်ပေးရတယ်။ အထောက်အကူနည်းတွေ လုပ်ပေးရတယ်။ လူနာတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်ရှည်သီးခံပြီး၊ ဆရာဝန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အားကိုးကြတယ်လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။
Traffic Law ယာဉ်စည်းကမ်း
ကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ အီးမေးလ်ကလာတာတွေ ဖြေပြီးပြီ။ မက်ဆင်ဂျာကလာတာတွေလည်းပြီးသလောက်ရှိုပြီ။ မက်ဆေ့ခ်ျ ကျန်ဦးမယ်။ အဲတာနဲ့ သူများတင်တာတွေ လိုက်ဖတ်တယ်။
ယူအက်စ်မှာနေတဲ့ သားအမိ မြန်မာပြည် အလည်ပြန်နေကြတယ်။ တောမှာ လှည်းစီးနေတဲ့ပုံတင်တယ်။ ဆိ-ဘဲ့လ် လို့ ရေးလိုက်တယ်။
ဖရင်းဆရာမတယောက် ရင်ပတ်မှာ ဖဲကြိုးပြာတပ်ထားတာတွေ့တယ်။ ဘာလဲတော့ မသိ။ ဆရာတို့နေရတဲ့မြို့မှာ လူဆိုးက ခံပစ်လို့ ရဲအရာရှိတယောက်သေသွားတယ်။ အဲတာနဲ့ လမ်းတွေမှာ ဖဲကြိုးပြာတွေစည်းပြီး လေးစားစာနာမှု ပြသကြတယ်လို့ ရေးလိုက်တယ်။
အဲဒီဖြစ်တဲ့နေ့က ကျွန်တော်ကျောင်းအသွား လမ်းပိတ်ထားလို့ လမ်းကွေ့ပတ် မောင်းခဲ့ရတယ်။ မနှစ်က ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ဆရာလုပ်နေတဲ့ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေကို ရဲဌာနခေါ်ပြီး ရှင်းလင်းပြသတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ယာဉ်စည်းကမ်းမလိုက်နာမှုတခုဖြစ်ရင် နောက်ကနေ ရဲက လက်နှစ်ဖက်ကို မြင်အောင်ပြ၊ ကားမှန်ကိုချ၊ ဖြေးဖြေးလုပ်၊ လက်ကို ခေါင်းပေါ်တင်ထား စသဖြင့် နောက်ကနေ အမိန့်ပေးတယ်။ ရှေ့ကားမောင်းတဲ့သူ အင်္ဂလိပ်စကား တတ်တာ မတတ်တာ သူတို့မသိ။ ခိုင်းတာကို လွဲလုပ်ရင် သေနတ်ထုတ်မယ်။ ကာဗာလုပ်ပေးဘို့ရာ နောက်ထပ်ရဲကား အကူအညီ ခေါ်မယ်။ စသဖြင့်ရှင်းပြတယ်။ သူတို့ခေါင်းထဲမှာ အဲဒီကားထဲကလူကနေ သူတို့ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်လားပဲ ရှိတယ်တဲ့။ အဲလောက် စည်းကမ်းကြီးကြီးထား လုပ်တာတောင် ရဲအရာရှိတွေ အခင်းဖြစ်ရာမှာသေဆုံးတယ်။ ဆောရီး။
မြန်မာပြည်မှာ ယာဉ်စည်းကမ်းတွေ ကောင်းပါစေသတည်း။
ကျား ၂ မ ၇
1. မင်္ဂလာပါဆရာရှင့် ကျွန်မက အိမ်ထောင်ကျတာ ၃နှစ်ရှိပြီ ကလေးတယောက်ရပါပြီရှင့် အသက်က ၂၆ နှစ်ပါရှင့်။ အဖြူဆင်း အရမ်းများတယ် ပြီတော့ အရည်မဟုတ်ဘဲ အဖတ်တွေချည်းဖြစ်နေလို့ပါအနံတော့မရှိဘူး ဘာဆေးသောက်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဆရာ့အကြံပေးချက်ကို မျှော်လင့်ပါသည်။
Vaginal infections မွေးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vaginal-infections.html
2. ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၆ နှစ်ပါ မနေ့ညကထိ ဘာမှမဖြစ်ပဲ မနက်နိုးလာတော့ ဘယ်ဘက်နားရွက်နဲ့ အံသွားရှိတဲ့နား တ၀ိုက်ရောင်နေပါတယ် လူကြီးတွေကတော့ပါးချိတ်ရောင်တယ် ပြောကြတာပါပဲ နာပြီး ညောင်းနေပါတယ် ဘာလို့ပါးချိတ်ရောင်တာလဲ ဆိုတာနဲ့ ဘာဆေးသောက်သင့်လဲ ဖြေပေးပါရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
Parotitis တံတွေးထွက်အိတ်ရောင်ခြင်း http://doctortintsweblogspotcom/2017/03/parotitishtml
3. ဆရာ ခင်ဗျား ကျွန်တော့အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်ဝန် ၄လရှိနေပါပြီ ၁ လကျော်ထဲက အန်တာများလို့ ဆေးရုံတက်ထာ ၃ခါရှိပါပြီ တော်၂လည်းပိန်ကျသွားပါတယ် ယခုအအေးမိပြီ နှာဆေး ချောင်းဆိုးနေလို့ ဆေးခန်းပြထားပါတယ် သတင်းတွေမှာတဲ့ H1N1 ဖြစ်မှာကြောက်ပြီး အားငယ်နေလို့ပါဆရာ သူ့မှာ ပန်းနာရင်ကြပ်လည်းရှိတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံလေးပေးပါဆရာရယ်
Pregnancy and vomiting ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အန်ခြင်း http://doctortintsweblogspotcom/2014/11/pregnancy-and-vomitinghtml
Pregnancy and Antihistamines ကိုယ်ဝန်နှင့် အအေးမိပျောက်ဆေး http://doctortintsweblogspotcom/2014/11/pregnancy-and-antihistamineshtml
4. ဆရာ့ရှင် ကျွန်မရဲ့ အသက်က 31နှစ်ပါ အိမ်ထောင်ကျတာ ၆ နှစ်ရှိပါပြီ ၄ နှစ်အရွယ်သမီးလေး ၁ ယောက်ရှိပါတယ် လွန် ခဲ့တယ် ၄ လကတယ့်က ကျွန်မ ရာသီ၁ ခါ လာရင် ပထမ ၂ ရက်ကတော့သိပ်မများပေမယ့် ၃ ရက်မြောက်ကတယ့်က ၁ ရက်ထည် ၁ ရက်သွေးတွေက ပိုပြီ ဆင်းပါတယ် ၁ ရက်ကို pad အနည်းဆုံ ၆ ခု ၇ ခု လောက်လည်းရပါတယ် ရက် ၂၀ ကျော်ထိသွေးမသိပ်ပါ og က Azeptil 500 mg ၁နေ့သောက်ခဲ့သော်လည်း ဒီလက ၂၇ထိတောင်သွေးမသိပ်လို့ og က T V S ရိုက်ခိုင်ပါတယ် TVS အဖြေမာကတော့ ရေအိတ်လည်း ရှိပါတယ် နောက်ကြတော့ သားအိမ်နံရံက အရမ်းထူးပါထယ် ကျွန်မ က နောက်ကလေးလည်းအရမ်းအမ်းလိုချင်ပါတယ့်ရှင် အခုလို့သာအိမ်နံရံထူးရင်ကလေးရနိုင်လား ဆရာရအောင်ဘယ်လိုကုရမာလည်းရှင်း
Ovarian cyst မျိုးဥအိမ်အလုံး http://doctortintsweblogspotcom/2015/02/ovarian-cysthtml
Endometrial hyperplasia သားအိမ်ထူခြင်း http://doctortintsweblogspotcom/2014/12/endometrial-hyperplasiahtml
5. ဆရာရှင့် သမီးက မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ကို cytotec ၁၂လုံးသုံးပြီးနှစ်ခါဖြတ်ချဖူးပါတယ်ရှင့်dand c လည်း လုပ်ထားပါတယ်ဆရာ
PID အမျိုးသမီးတင်ပါးဆုံတွင်းရောင်ခြင်း http://doctortintsweblogspotcom/2014/11/pid-3html
6. ဆရာကြီးရှင့် ကျွန်မအသက် ၃ဝပါ ကိုယ်ဝန် ၂ရ ပတ်ပါရှင့် အလုပ်ထဲမှာက ထိုင်နေရတာများပါတယ် အလုပ်မရှုပ်တဲ့အချိန်တော့ ထပြီး ခဏခဏ လမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်များတဲ့အချိနိတော့ မေ့ပြီးထမလျှောက်ဖြစ်ဘူး အဲလို အချိန်ကျရင် ခါးတွေ တော်တော်နာပါတယ် အလုပ်ထဲမှာကလည်း pressure များပါတယ်ရှင့် အဲဒါ ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်လား ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလားရှင့် ပင်ပန်းတဲ့နေ့မျိုးဆို ကလေးကအလှုပ်နည်းပါတယ်ရှင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးများ ဖြေကြားပေးပါရှင့်
7. ဆရာခင်ဗျား ယခုပို့ထားတဲ့ဆေးအကြောင်း(အလားတူဆေးများအကြောင်း) ဆရာ့အမြင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးကို ယနေ့ခေတ် လူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး post တခုလောက်ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်
8. ဆရာ မင်္ဂလာပါ သမီးတခုလောက်မေးချင်လို့ပါ သမီးအသက်က၂၇နှစ်ပါ လူလွတ်ပါ ရာသီလာတိုင်းလဲမခံစားနိုင်အောင်အောင့်ပါတယ်ဆရာနောက် ( ၇ )ရက်အကြာမှာလဲ အမြဲတမ်း လိုလိုအောင့်နေလို့ဆရာဝန်သွားပြဖြစ်တယ်ဆရာ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တယ်အခါကျ သားအိမ်မှာအသားပိုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာ ကွမ်းသီးအလုံးလောက်လိုတော့ပြောပါတယ် အဲ့တာစိုးရိမ်ရပါသလားဆရာ ခုလက်ရှိတော့ Primolut Nကို ၃လ သောက်ခိုင်းထားပါတယ် ခုသမီးသောက်နေတာတော့ ၄ရက်ရှိပါပြီ ဆေးသောက်ရုံနဲ့ပျောက်နိုင်ပါသလားဆရာ သမီးရာသီလာမှာကိုတောင်ကြောက်နေပါပြီဆရာ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါဆရာ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးစေချင်ပါသည် ဆရာ သမီးကြောက်လို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Uterine Fibroid (1) သားအိမ်အလုံး (၁) http://doctortintsweblogspotcom/2014/11/uterine-fibroidhtml
9. မကွေးတိုင်း မြိုင်မြို့နယ်ကပါဆရာ အသက် ၃၅ နှစ်ရှိပါပြီ ဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ ခြေဖမိုးမှာပါ ဖြစ်တာကတော့ တနှစ်ကျော် ရှိပါပြီ ကျနော်ကျောင်းဆရာတဦးပါခင်ဗျာ ဖြစ်တာကတော့ မများသေးပါဘူးခင်ဗျာ
Dermatitis ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့ အရေပြားအနာ http://doctortintsweblogspotcom/2016/08/dermatitishtml
Historical Events သမိုင်း
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = ရုရှားနဲ့ အမေရိကန် ဘတပြန် ကျားတပြန်
1. Yin Yin Naing ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီလဲ ဆရာ
2. Yoo Chan's comment was marked as spam.Show comment
3. တိုး တိုး spy မိသွားလို့လားမသိဘူးဆရာ share လိုက်ပြီဆရာ.
4. Kyaw Khing Soe ဘာတွေဖြစ်ကျတယ် မသိဘူးနော်ဆရာ
5. Arkar Htun ဒီနှစ်နိုင်ငံချကြတော့မယ်ထင်တယ်
6. Daybit Ohn ဝက်ဝံvsသိန်းငှက်ဘယ်သူနိူင်မလဲ
7. Myat Thura share မယ်နော်ဆရာ
8. Niang Sokayaytee ထူးတော့ထူးနေပီ
9. လဲ့လဲ့ အရာရှိတွေကလည်းများလိုက်တာ
10. LuLin MinMann ကမ္ဘာ မြေကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ🌺🍁🍃 နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်တွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ 😌😌
11. ရွှေ ပေါက် ကျားနဲ့ဆင်လယ်ပြင်မှာတွေ့ကြမယ်
12. Karyan Soe Moe ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပီလဲဗျာတို့ရေ
13. မွန်ဆီယာ လော့ ပထဝီကတော့ US ကသာပါတယ် ရုရှားကဓါးစာခံတွေအများကြီး ပိုင်ထားတယ်
နိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်ဖြစ် ပြည်တွင်းသတင်းဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းစဉ်ကို လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင် တပ်လေ့ရှိကြတယ်။ မျက်ပြူးဆံပြာဖြစ်အောင်၊ လန့်ကြောက်သွားအောင်၊ စွဲမက်တမ်းတစေအောင်ရေးကြတာ မီဒီယာထုံးစံဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်တဲ့သူတွေက အရေထူဖို့လိုတယ်။ နောက်ခံအခင်းအကျင်းတွေ သိထားမှသာ တွက်ဆတာအမှန်နဲ့ နီးစပ်မယ်။
တလောက မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန်ကြားမှာ ပူလောင်တာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ တချို့က ပို့စ်လေးတခုတည်း၊ အဲတာတောင် ခေါင်းစဉ်သာဖတ်ပြီး အခုပဲ စစ်ကြီးဖြစ်တော့မလို၊ မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မလဲ စသဖြင့် ကွန်မင့်တွေရေးကြတယ်။
အဲလို မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာမှာ အဲလိုဟာတွေက နေ့တိုင်းလိုလို ဖြစ်နေတာ။ တင်းမာမှုတွေ ပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ သမိုင်းနောက်ခံတွေ သိထားရင် တွက်ဆတာ မလွဲတတ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာ့ရာဇဝင်နဲ့ ကမ္ဘာ့သမိုင်း ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ဖတ်စရာတွေ ရှိစေချင်တယ်။ သင်ကြားတာတွေ ရှိစေချင်တယ်။ ဆွေးနွေးနှီးနှောတာတွေ ရှိစေချင်တယ်။
Media Ethic ဟုတ်ပါတယ်
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = ရုရှားနဲ့ အမေရိကန် ဘတပြန် ကျားတပြန် - ဒီစာကို မုံရွာဂေဇက်ကို အရင်ပို့ပါမယ်။
၁။ Wunna Aung ဖေ့ဘွတ်ကို အရင်ပို့ တာများ မုံရွာအရင်ပို့ မတဲ့ ဆရာရယ် ဟုတ်ပါ့မလား
၂။ Kyaw Kyaw မီဒီယာ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတွေလားဆရာ သမတသာဆိုတယ်
၃။ မောင်ပန်း မွှေး သူ့ဒေသကလူတွေ အရင်သိစေချင်လို့ပေါ့
မီဒီယာမှာ စာရေးသူတွေ စည်းကမ်း အပြန်အလှန်လေးစားလိုက်နာကြရတယ်။ ၃-၄ ရက်လောက်က သတင်းစာလား ဂျာနယ်လားတော့ မသိပါ။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ တုပ်ကွေးစာကို သတ်ပုံတွေပြင်ပြီးရိုက်ထားလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာပဲ ရေးလိုက်တယ်။ ကာယကံရှင်ဆီတော့ မပြောအားပါ။
ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်လောက် DVB ဝဘ်ဆိုက်မှာ စာရေးတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကြိုတင်စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်အရလုပ်တယ်။ အဲဒီကိုအရင်ပို့ပြီးမှ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတင်တယ်။ အဲဒီကနေလည်း စာရေးခကို အဲဒီကဘဏ္ဍာရေးဌာနက စနစ်တကျလုပ်ပေးတယ်။ မကြာသေးခင်ကတော့ ကျွန်တော့ဆီဆက်သွယ်နေတဲ့ တဦးတည်းသောသူ အဲဒီကနေ နှုတ်ထွက်တာနဲ့ လူသစ်တွေကနေ မဆက်သွယ်လာလို့ DVB မှာ စာမပို့ဖြစ်တော့ပါ။
မုံရွာဂေဇက်မှာ စာရေးမယ်လို့ ပြောထားပြီးပါပြီ။ စည်းကမ်းလည်းချထားတယ်။ အပတ်စဉ် တတ်နိုင်သလောက်ရေးမယ်။ သတ်ပုံတော့ ဂရုစိုက်ပေးပါ။ အဖိုးအခ မယူပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ညကတင်လိုက်တဲ့ စာမြည်းနဲ့ စာတပုဒ်လုံး မတူပါ။ အခုပဲ မုံရွာဂေဇက်ဆီ အီးမေးလ်နဲ့ စာပို့လိုက်ပါတယ်။
ဗူး နဲ့ ဘူး ဋီကာ
စစ်အစိုးရလက်ထက်ကထုတ်ထားတဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်မှာ ဘူးပင်လို့ တွေ့ပါတယ်။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ ဗူးပင်လို့သာ ရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်တန်း (၁၉၅၃-၅၄) ဖတ်စာမှာ ဘဦး ရေကူးနေသည်။ ဗူးသီးနုနု မခူးရ။
အရင်ကဆိုစကား = ဘူးတလုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲ။
နောက်ပေါ်အမိန့် = ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်၊ ရေပါတာသာလိုချင်တဲ့။
ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်း (မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရား) = ထို့ကြောင့် မြင်ဘူး၊ ကြားဘူး၊ နံဘူး၊ စားဘူး၊ တွေ့ထိဘူး၊ ကြံသိဘူးသော ထိုအတိတ်ရုပ်နံတို့ကို ပြန်၍စဉ်းစားမိတိုင်း ဃနပညတ်ထင်ရှားလျှက် နိစ္စ၊ သုခ၊ အတ္တဟု ထင်မြင်စွဲလမ်းမှုသည် ဖြစ်ပေါ်၏။
ပုံ = ကိုဆံရှည်နဲ့ မစန္ဒာတို့အိမ်ကဗူးစင်
၁။ စိုးရိမ်ရလား၊ မဖြေလိုပါ။ ဆရာဝန်ပြဘို့ လိုအပ်ပါသလား၊ မဖြေလိုပါ။ အဲတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲ၊ မဖြေချင်ပါ။ ဘာဖြစ်နေလို့ ဘယ်လို ပျောက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင် ဖြေပါတယ်။
၂။ အင်တာနက်ကပုံတွေပြပြီး အဲတာဖြစ်နိုင်လား၊ မဖြေပါ။ ကျွန်တော် ကျမမှာ အဲလိုဖြစ်နေလို့ မဖြေပါ။
၃။ ကြော်ငြာဆေးတွေ ဖြေရတာ အားနာရတယ်။ ဂရုတွေထဲကလည်း အဆီအငေါ်မတည့်တာတွေလာတယ်။
ဆရာရှင့် flaxseed oil ဆေးကို နို့တိုက်မိခင်တွေ သောက်လို့ရပါတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်ရှင့် flaxseed oil ဆေးလေးအကြောင်း ရှင်းပြပေးပါဆရာရှင့်။ လေးစားစွာဖြင့်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာရှင့်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် group တခုမှ post ကိုတင်ထားတာတွေ့လို့ပါဆရာ။ ဒီ flaxseed oil ဆေးလေးအကြောင်း သိချင်လို့ပါဆရာ။
မေးခွန်းထဲကဆေးဆိုတာ နှမ်းကြပ် ခေါ် နှမ်းနက်တမျိုးကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါမယ်။ နှမ်းဆိုတာ ဖြူဖြူ မည်းမည်း၊ လူတွေစားသုံးတာဖြစ်တယ်။ မကောင်းဘူးလို့တော့ ဖြေမသင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူများစီးပွါးရေးကလည်းရှိတယ်။
၄။ သာမန်စဉ်းစားယူလို့နိုင်တဲ့ ဥပမာ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဖို့ ဟိုအသီး၊ သည်အရွက်၊ ဒီအရက် ဆိုတာတွေကို မဖြေချင်ပါ။ အတော်ကို မေးနေကြတယ်။
ဘက်ဆဲလားတဦးရေးတဲ့ ဗုဒ္ဓ စာအုပ်
တမြန်နေ့က မြေးအကြီးဆုံးအိမ်ကနေ ယူလာခဲ့တယ်။ သူ နယူးဒေလီကနေ ယူအက်စ်ကိုလာစဉ်က လေယာဉ်စီးရင်း ဖတ်ဘို့ ဝယ်ခဲ့တာတဲ့။
အခုမှ စဖတ်မိတာ။ အဖွင့်မှာ သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးဟာ နီပေါနယ်စပ်က ရာဗီဆန်သမ်နမ်ဘုရင်နယ်မြေကို ကိုယ်တိုင် ချီတက်ပြီး စစ်ခင်းတာနဲ့ စထားတယ်။ မြင်းတွေကတဲ့ စစ်သုံးရထားနဲ့။ ဒါးကိုင်ထားတယ်။ အောင်ပွဲခံ အိမ်ပြန်မယ်လို့ အမိန့်ပေးတယ်။
နောက်အခန်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရင့်မာကြီးနဲ့ မိဖုရားကြီး မာယာဒေဝီကနေ သူ့နေရပ်တိုင်းပြည်ကို အလည်ပြန်လိုခွင့် နန်းရင်ပြင်မှာ တောင်းခံနေတယ်။
စာရေးသူအမည်ကို မြေးမကိုမေးတော့ ပန်ချာဘီဖြစ်မယ်တဲ့။ အားတဲ့ချိန်တိုင်းမှာ ဆက်ဖတ်ပါဦးမယ်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့တာက ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်ရေးသားတဲ့ ဇိနတ္ထပကာသနီ။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရာသီတုပ်ကွေး ကာကွယ်နည်းများ
အပိုတွေ မလိုပါ။ လိုတာတွေ မလုပ်မဖြစ်ပါ။ ရိုးရှင်းပါတယ်။ အကုန်အကျလည်း မများပါ။
အလေးပြုခြင်း နှင့် ဂါဝရပြုခြင်း
ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော်ထင်နေတာ မှန်လား မှားလား ဝေခွဲရခက်နေလို့ပါ။ အလေးပြုတာနဲ့ ဂါဝရပြုတာ ကွာခြားချက်လေး သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ ဥပမာ အာဇာနည်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်အပေါင်း တို့အား ဂါဝရပြုပါသည် (သို့) အလေးပြုပါသည်။ အလေးပြုတာနဲ့ ဂါဝရပြုတာ ပြည်သူတယောက် အနေနဲ့ မည်သည့် စကားလုံးက ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝသလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပေးပါဆရာ။
ဂါရဝပြုသည် = အရိုအသေပေးသည်၊ အလေးအမြတ်ပြုသည်။
အလေးပြုသည် = လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတဲ့ လက် (ကိုယ်) အနေအထားနဲ့ အရိုအသေပြုခြင်း။
အရပ်သားတွေမှာလည်း အလေးပြုလို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ မတ်တတ်ရပ်ပြီး ဦးခေါင်းငုံ့ ခါးကွေးညွတ်ပြီး အရိုအသေပြုတာကို အလေးပြုတယ်လို့ သုံးပါတယ်။ ဂါရဝတရား (၁ဝ) ပါး ခေါ် ဘုရားကအစ မိတ်ဆွေအပေါ် လေးစားရခြင်းတွေနဲ့ မတူပါ။ ဂါရဝေါစ နိဝါတောစ အပြန်အလှန်ရိုသေ နှိမ့်ချခြင်း မင်္ဂလာတရားနဲ့တော့တူမယ်။ မေလှမြိုင်သီချင်းနဲ့ ဆရာ မင်းသုဝဏ် ကဗျာထဲမှာလည်း အလေးပြုသည်လို့သုံးပါတယ်။
ခြောက်ဖေါ်နတ်က ကြားစေသော်ဝ်။ (မင်းသုဝဏ်)
စစ်အစိုးရကနေ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုတန်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ စာအုပ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ခဲ့တယ်။
• မြက်ခင်းသစ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ စတယ်။ နောက် နေပြည်တော်သစ် ဆောက်တယ်။
• မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒ ဆက်လာတယ်။ နောက် အုပ်လုံးပြည့်မုသာဝါဒ ဖွဲ့စည်းပုံရေးတယ်။
• လှိုင်းကြီးလေထန်လည်း ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ လှိုင်းကြီးလေထန် ပြန်ပြန်လာတယ်။ ဆောရီး။
မိတ်ဆွေတဦးရေးတဲ့ အနာဂတ်ကို မက်ဆေ့ခ်ျကနေ ပြင်ပေးတယ်။ ချက်ချင်းပဲ သူကပြင်ရေးပါတယ်။
ဆေးကျောင်းသားသူငယ်ချင်းဆို ပိုအားမနာ သတ်ပုံပြင်မယ်ပြောပြီး သဏ္ဌာန်နဲ့ မြားကို ကွန်မင့်ကနေပြင်လိုက်တယ်။ သူကလည်း စိတ်ဆိုးမယ့်လူမဟုတ်။
ဖရင်းလား ဘာလား မသိသူတွေကိုတော့ ပြင်ပေးရမှာအားနာတယ်။ အလိုကျရေးရမှာ အလိုကြရေးတာတွေ့တယ်။ တခြား အမှားတွေလည်း တွေ့တယ်။ သည်အတိုင်းသာ ထားရတယ်။
တစ်နေ့၊ တစ်ချက်၊ တစ်ဦး၊့့ တစ်အုပ်စုကိုတော့ မထိရဲ မတို့ရဲ။ သူတို့က အုပ်စုတောင့်တယ်။
သတ်ပုံတွေ ဘယ်လိုရေးရေး၊ တုပ်ကွေးဘေးက ဝေးကြပါစေ။
မြန်မာပြည်မှာ တုပ်ကွေးအမျိုးမျိုးက ဒုက္ခပေးနေချိန်ဖြစ်တယ်။ ဆောရီး။ ဟိုအသားမစားရဲ၊ သည်အသားမစားရဲလို့ ရေးကြတယ်။ နေစရာမရှိသလို စားစရာမရှိသလို ထင်မှတ်နေကြတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ ရာသီဥတုအပေါ်မူတည်ပြီး ပေါက်ပွါးကူးစက်ပါတယ်။ ဥတုပြောင်းတာနဲ့ ကူးစက်တာတွေမဖြစ်တော့ပါ။ နောက်ရာသီမှာ နောက်တမျိုးလာတတ်တယ်။ ဆောရီး။ ပိုးမွှားတွေကို အဝေးသွားမရှာဘို့ ရေးပါရစေ။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆဲလ်ပေါင်း ၁ဝဝ ထရီလီယန်ရှိတယ်။ ဆဲလ်ဆိုတာ အရေပြားဆဲလ်၊ ကြွက်သားဆဲလ်၊ အရိုးဆဲလ်၊ ဦးနှောက်ဆဲလ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်အားလုံးရဲ့ ၁ဝ% သာ လူ့ဆဲလ်တွေဖြစ်ပြီး ကျန် ၉ဝ% က ပိုးမွှားတွေဖြစ်တယ်။ ဗက်တီးရီယားတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ ဖန်းဂတ်စ် ခေါ် မှိုတွေနဲ့ တခြား မိုက်ခရိုအော်ဂနင်ဇင်တွေ ဖြစ်တယ်။
လူ့အူတွေထဲမှာ ဗက်တီးရီးယားပေါင်း ၁ဝဝ ထရီလီယန်ရှိတယ်။ သူတို့အလေးချိန်က ၃ ပေါင်။ နောက်လေ့လာမှုတခုအရ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆဲလ်ပေါင်း ၃ဝ ထရီလီယန်ရှိတယ်။ သွေးနီဥတွေက ၈၄% ရှိတယ်။ ဗက်တီးရီးယားပေါင်းက ၄ဝ ထရီလီယန်ရှိနေတယ်။ အစာလမ်းထဲမှာ အများဆုံးနေကြတယ်။ အပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုနေကြတယ်။ လူ့ဂေဟနစ်လို့ ခေါ်တယ်။
ပိုးမွှားလေးတွေက အရွယ်အစားအလွန်သေးငယ်လို့ လူ့ကိုယ်ထုထည်ရဲ့ ၁% ကနေ ၃% သာရှိတယ်။ ပေါင် ၂ဝဝ လေးတဲ့ လူတယောက်မှာ ပိုးမွှားအလေးချိန်က ၂ ပေါင်ကနေ ၆ ပေါင်အထိလေးတယ်။
ဗက်တီးရီးယားတွေထဲမှာ လူတွေလိုပါပဲ အကောင်းတွေနဲ့ အဆိုးတွေရှိတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတော့ လူဆိုးက ပိုများတယ်။ အအေးမိတာ၊ နှုတ်ခမ်းအပူကန် ခေါ် ဆေးစာလို အအေးနာ၊ ကြွက်နို့၊ တုပ်ကွေး အမျိုးမျိုး၊ ရေကျောက်၊ ဝက်သက် စတဲ့ ရောဂါတွေကို ဆိုးတဲ့ဗက်တီးရီးယားတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်လေးတွေက ဗက်တီးရီးယားတွေထက် သေးတယ်။ အဆ ၁ဝဝဝ သေးငယ်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ ဆက်ရှင်နေဘို့ လူဖြစ်ဖြစ်၊ အကောင်တွေဖြစ်ဖြစ်၊ ဗက်တီးရီးယားဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေသူဆီကထွက်လာတဲ့ အမှုံအမွှားလေးတွေထဲမှာ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေပါပြီး ရှူမိသူတွေကို ကူးစက်တယ်။ ချောင်းဆိုး နှာချေရာကနေထွက်တာတွေက ကြမ်းပြင် မျက်နှာပြင်တွေပေါ်ကျနေလို့ ထိကိုင်မိသူလက်ဆီ ကူးစက်မယ်။ အဲတာကြောင့် လက်ကို ခဏခဏဆေးဘို့ ပညာပေးပါတယ်။ ချောင်းဆိုးတိုင်း တံတောင်ဆစ်ထဲဆိုးဘို့နဲ့ တစ်ရှူးသုံးဘို့၊ တစ်ရှူးကို စနစ်တကျစွန့်ဘို့ ပညာပေးပါတယ်။ လူ့မျက်နှာပေါ်မှာ မိုက် ခေါ် ပိုးမွှားလေးတွေ Demodex folliculorum နဲ့ D. brevis ခေါ် ၂ မျိုးရှိနေတယ်။ နေ့တိုင်း မျက်နှာသစ်ရတယ်။
နှာခေါင်းစည်းသုံးရတဲ့သဘောက ကိုယ့်အနီးအနား တမီတာဝန်းကျင်မှာ ချောင်းဆိုး နှာချေသူရှိနေရင် ကာကွယ်ပါမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သဘောက ခုခံအားရလာစေဘို့ ဖြစ်တယ်။ ဆေးထိုးပြီး ခုခံအားရအောင် စောင့်ရချိန်ရှိတယ်။ အရေးအကြောင်းဆိုရင် အင်တီဘော်ဒီ ထိုးရတယ်။
လူ့ခံတွင်း ခေါ် ပါးစပ်ထဲမှာ ဗက်တီးရီးယားတွေ အများကြီးရှိတယ်။ သွားတွေ သွားဖုံးတွေကြားမှာနေကြတယ်။ အာဟာရဓါတ်တွေရနေကြတယ်။ အပူချိန်လည်းရတယ်။ အစိုဓါတ်လည်းရတယ်။ အစာလမ်းဆင်းသွားရင် အများစုဟာ အက်စစ်ဓါတ်ကြောင့် ပျက်စီးကုန်ကြတယ်။ လေမကြိုက်တဲ့ဗက်တီးရီးယားတွေပါတယ်။ ဖန်းဂတ်းစ် ခေါ် မှိုပိုးတွေလည်းရှိတယ်။ အဲတာကြောင့် ကလေးတွေ မှက်ခရုဖြစ်တယ်။ သွားရည်ကျတယ်။ မသိရင် သူငယ်နာလို့ ပြောကြတယ်။ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး နေ့တိုင်းလုပ်ကြရတယ်။
ရောဂါဗေဒပါမောက္ခက စာသင်စဉ်က ပြောပါတယ်။ ရောဂါတွေများလွန်းတာ မကြည့်နဲ့တဲ့။ ရောဂါရစရာတွေ များလွန်းပေမယ့် ရောဂါမရကြတာလည်း ကြည့်တဲ့။ တဆိတ်ရှိတိုင်း မျက်ကလူးဆံပြာ မဖြစ်သင့်ကြပါ။ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ရောဂါအတော်များများကို ကာကွယ်နိုင်တယ်။ မလိုတာလုပ်တဲ့သူတွေက လိုတာမလုပ်မိ ဖြစ်တတ်တယ်။
နှုတ်ခမ်းကွဲ နဲ့ အာခေါင်ကွဲ
ဆရာ့ဆောင်းပါး စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်မှာ တွေ့တာဆရာ။
ဟုတ်၊ ကျွန်တော် အခုမှသိတယ်။ ကျေးဇူး။
စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်မှာ (တ) တွေသုံးထားတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ ဆရာ ဒလဘန်း ရဲ့ ဝါဆိုဝါခေါင် ရေတွေကြီးလို့ ဆောင်းပါးမှာလည်း (တ) တွေပဲသုံးထားတာတွေ့ရပြီ ဆရာ။
ဟုတ်၊ စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာ ဒလဘန်းကို ချီးကျူးပါတယ်။ သတ်ပုံအလွဲနဲ့တူတဲ့ နှုတ်ခမ်းကွဲကို ပြင်နေပြီ။ စကားမပီတာနဲ့တူတဲ့ အာခေါင်ကွဲကို ပြင်ရအုံးမယ်။
မြသန်းတင့်ထက်တော်သူတွေကတော့ မြန်မာပြည်တစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်။ သူတို့က တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း။
Rocky bank of Chindwin River ကျောက်ဆောင်ဆိပ်
ရေကြီးနေတယ်ကိုတင်တော့ ဘယ်မလဲလို့ တယောက်ကမေးတယ်။ ပုံကချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းပါလို့ တယောက်က ဝင်ဖြေပေးတယ်။ တပြည်လုံးမှာဖြစ်နေတာမို့ ကိုယ့်နယ်ကို ဇောင်းပေးသလို မဖြစ်စေချင်လို့ မုံရွာလို့လည်း မရေးမိပါ။
တိတိကျကျဆိုရင် မုံရွာမြို့အနောက်ဖက်က ချင်းတွင်းမြစ်၊ ကျောက်ဆောင်ဆိပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အခုမြင်ရတဲ့ ရေမျက်နှာပြင်အောက် ပေလေးငါးဆယ်လောက်မှာ ကျောက်ဆောင်တွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ် ကိုးတန်း ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာ ညနေခင်းအပျင်းပြေဆိုပါတော့ စက်ဘီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ခြေလျှင်ဖြစ်ဖြစ် ကျောက်ဆောင်ဆိပ် ရောက်တတ်ပါတယ်။ ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာထိုင်ပြီး ဘာရယ်လည်းမဟုတ် တွေးတောစဉ်းစားခန်းဝင်ခဲ့တယ်။ စဉ်းစားစရာရယ်လို့ကလည်း ရှိလှတာမဟုတ်ပါ။ လိုက်ဖက်တဲ့သီချင်းကို အသံမထွက်ပဲ ဆိုဖြစ်တယ်။ မြို့မငြိမ်းသီချင်း ညနေခင်းဆီ နေရီရီ့့။ ကမ်းဆိပ်ရိပ်သာ ကျောက်ဆောင်ဆိပ်မှာ မုံရွာသူတွေ ရေချိုးမဆင်းကြပါ။ နေဝင်ဆည်းဆာကို ခံစားတာကလည်း စာစီစာကုံးထဲမှာ ဘယ်လိုထည့်ရေးမလည်းလောက်ထက်မပိုပါ။
ကျောက်ဆောင်ဆိပ်ကနေ အနောက်ဖက်ဆက်မျှော်ကြည့်ရင် တောင်တွေမြင်ရတယ်။ အမြင်ရောအတွေးပါ အဲသည် တောင်တန်းပေါ်မကျော်ခဲ့ပါ။ နောင်နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက်ကြာရင် အဲသည်တောင်တွေကို ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ ကျော်တက်ရလိမ့်မယ်လို့ မတွေးခဲ့ပါ။ မြစ်တွေ၊ တောင်တွေ၊ နယ်ခြားမျဉ်းတွေကို ဆက်ဆက်ကျော်ပြီးသကာလ အခုနေတဲ့အရပ်မှာ လာနေရမယ်လို့လည်း မသိခဲ့ပါ။ ကိုမင်းနောင်ရဲ့ ဇရာသီချင်းက အခုမှပိုပြီးသက်ဝင်နေပါတော့တယ်။
သို့သော် သည်ပိုက်ဆွေးနဲ့ လိုက်ရေးမလွယ်ပါ့့ နုပျိုသစ်လွင် ငယ်စဉ်ကိုမှန့်း့။
Photo by Sein Win
ည (မနက်) ၁ နာရီ၊ ၅ မိနစ်။
H1 N1 စိတ်မရှည် တုပ်ကွေး
တုပ်ကွေးက အတော်နှိပ်စက်တယ်။ သတင်းစထွက်ပြီး မိနစ်ပိုင်းကတည်းက ရေးပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၄ ပုဒ်ရှိပြီ။ ရေဒီယိုကနေလည်း ၂ ခါရှိပြီ ဖြေရတယ်။
မေးခွန်းတွေလာတာ မရေတွက်နိုင်ပါ။ ဖြေသင့်တာတွေကို ဖြေတယ်။ လင့်တွေလည်း ပို့ပေးတယ်။ သိသင့်တာတွေကို မေးတဲ့သူရှိသလို သူများကို ဂျောက်ချတဲ့ဆေးနည်းတွေကို မေးလာသူတွေက အတော်ကိုများတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ အုန်းရည်၊ ရမ်အရက်၊ B သွေး၊ အများကြီးပဲ။ အဲတာမျိုးတွေကို မဖြေချင်ပါ။ တတ်နိုင်သလောက်တော့ မဟုတ် မမှန် မှားယွင်းကြောင်းဖြေပါတယ်။ ကြာတော့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်မရှည်နိုင်ဖြစ်လာတယ်။
တုပ်ကွေးစာ ၁၄ ပုဒ်တင်ထားပြီး။ တားမြစ်ချက်တွေထဲမှာ အဲတာမပါလို့ဖြေရင် နားလည်မှုပေးနိုင်သမျိုးကတော့
Hpone Khit May May ဟုတ်ကဲ့ပါလို့စာပြန်တယ်။ တယောက်ကတော့ -
Ever Smile ဆရာ B သွေးပိုင်ရှင်တွေက H1N1 ပိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ခင်ဗျား
အမှားတွေ မေးရန်မလိုပါ။ ခဏခဏမေးနေကြတယ်။ မှန်တာကိုတော့ မေးသူက နည်းတယ်လို့ဖြေမိတော့ -
Ever Smile အမှားအမှန်ဆိုတာ သိချင်လို့ မေးတာပါ အမှန်ပဲဖြစ်ဖြစ် အမှားပဲ ဖြစ်ဖြစ် သိနေရဲ့နဲ့တော့ မမေးပါဘူး ဆေားရီးတဲ့။
ဖြေတဲ့သူ စိတ်မရှည်တော့ မေးတဲ့သူ စိတ်တိုရော။
ည ၁၁ နာရီ၊ ၁၃ မိနစ်။
ဇကောဇက နဲ့ စကောစက ဘယ်ဟာအမှန်လဲဆရာ။
ဇကောဇကကို စကားပြောဆိုရာမှာ အတော်သုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်ဟောင်းသတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာရော နောက်ထုတ်တွေမှာပါ မပါ။ ဆန်ခါကို ဇကာလို့ပါ သတ်ပုံစာအုပ်ဟောင်းတခုမှာ တွေ့တယ်။ ဆန်ကောကို ဇကောလို့ပြောပေမယ့် ဇကောဇကအသုံးမှာ မဆိုင်ပါ။
ဇကောဇက က ဇက ကနေလာတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဇကလည်း သတ်ပုံစာအုပ်အားလုံးမှာ မတွေ့ပါ။ ဇကဆိုတာ အကြီးစားလည်းမဟုတ်၊ အငယ်စားလည်းမဟုတ်၊ ကြားဖြစ်နေတာမှာ သုံးတယ်။ အရွယ်အစားမှာ လူဖြစ်ဖြစ် သုံးစွဲစရာပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ် သုံးတယ်။ အချိန်ကိုလည်း သုံးတယ်။ အင်္ကျီလက်စကလို့ရှိတယ်။ ဟိုမရောက် သည်မရောက် သဘောမှာလည်း သုံးကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သိပ်သိတာတော့ မဟုတ်ပါ။
ကွန်မင့်ကနေ အကိုးအကားတခု ပို့ပေးတာရတယ်။ ကျေးဇူး။ အဲတာမှာ စကောစကလို့ရေးပါတယ်။
Photo from Aung Tin
ချစ် ခြစ် ချက်
၁။ ဆရာရှင့် နေခြစ်ခြစ်တောက်ပူတာလာာား ချစ်ချစ်တောက်ပူးတာလားသိချင်ပါတယ်ရှင့်။
၂။ ဆရာ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မအသက်ကတော့ ၂၂ နှစ်ရှိပြီဆရာ။ ကျွန်မကိုယ်ဝန်က ၃ လပြည့်တော့မယ်၊ ဒါပေမယ့် သွေးခနခနဆင်းနေလို့ ဘာများလုပ်သင့်သလဲဆရာ။ ဆရာအကူညီလေးလိုချင်လို့ဘာ။ ကျွန်မ ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲဆရာ။
သားအိမ်လို့ ရေးရတယ်။ ချစ်ရမယ်တော့ မဟုတ်လောက်ပါ။ ခြစ်လို့ ရေးရတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ ရေးရမယ်။ ခဏခဏလို့ ရေးရမယ်။
၃။ ခွဲစိတ်ဆိုတာ အရေပြားချစ်ထုပ်ရမှာလားဆရာ။
ချစ် မဟုတ်ပါ။ ထုပ် မဟုတ်ပါ။ ခြစ်ထုတ်လို့ ရေးရမယ်။
၄။ သားဦးကိုယ်ဝန် ၂ လပျက်ကျလို့ သားအိမ်ချက်ဖူးပါတယ်။့့
အိုဂျီက သားအိမ်ကို မချက်လောက်ပါ။ သားအိမ်ခြစ်လို့ ရေးရမယ်။
ဆရာရှင့် CD4 ဘယ်လောက်ဆို HIV လူနာတွေကို Septrin တိုက်ပါသလည်းရှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ပြောပြပေးပါရှင့်။ မနက်ဖြန် ဆရာကိုပြန်ပြောရမှာမို့လို့ပါရှင့်။ သမီးရှာမရလို့ပါရှင့်။ Septrin prophylaxis in HIV အကြောင်းသိချင်လို့ပါရှင့်။
ချဉ်းနင်းဆိုတဲ့စကားလုံး အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြပေးပါလားဗျ။ ဥပမာ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်။ နောက်ပြီး ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်ဆိုတာ ၂၀ ရာစုလား ၂၁ ရာစုလားဗျ။ စာတကြောင်းတွေ့လို့ပါ။ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်သို့ စတင်ရောက်ရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၁ ရာစုအတွင်းသို့ ချဉ်းနင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၂ဝဝဝ ခုပြည့်ပြီးကစလို့ ၂၁ ရာစုထဲလို့ပြောကြတယ်။
အရင်သတ်ပုံစာအုပ်ထဲမှာ ချဉ်းကပ်သည်လို့ပါတယ်။ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်သည်လို့ ရေးကြတယ်။ တဖြေးဖြေးဝင်လာတဲ့ သဘောမှသာ ရေးသင့်တယ်။ ချဉ်းနင်းတိုက်ခိုက်လို့ ရေးတာလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။ စီးနင်းတိုက်ခိုက်လို့ရေးမှသာ မှန်မယ် ထင်ပါတယ်။
စေ့ချဉ်း = အကျဉ်းရုံးသည်
ချုံးချဉ်း = စပ်ချဉ်း = အကျဉ်းချုံး
Pigeon diseases ခိုတွေကတဆင့် ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ
ဆရာ တခုလောက်မေးပါရစေ။ ရန်ကုန်မှာ ခိုတွေပေါပြီး ခိုစာကျွေးတဲ့နေရာမှာဆို ခိုအညစ်အကြေးတွေလည်း အများကြီးရှိတော့ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးအတွက် စိုးရိမ်ရပါသလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Dr. Tint Swe ရှင့်။
၁။ Histoplasmosis ဟစ်တိုပလပ်စ်မိုးဆစ် ခေါ် အသက်ရှူလမ်းရောဂါ။ ခိုတွေကနေကျတာတွေမှာပါနေတဲ့ ဖန်းဂတ်စ် ခေါ် မှိုတမျိုးကနေဖြစ်တယ်။ ဆိုးတယ်။
၂။ Candidiasis ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ် ခေါ် Yeast ယိစ် ခေါ် Fungus infection မှိုရောဂါတမျိုး။ အရေပြား၊ ပါးစပ်၊ အသက်ရှူလမ်းနဲ့ အစာလမ်းမှာ ရောဂါရစေနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ဗဂျိုင်းနား ခေါ် မွေးလမ်းမှာအဖြစ်များတယ်။ ဖြစ်ရင် ယားပြီး တခုခုဆင်းမယ်။
၃။ Cryptococcosis ခရစ်ပတိုကော့ကိုးဆစ် ခေါ် ခိုအစာလမ်းကနေ လူ့အသက်ရှူလမ်းနဲ့ ဦးနှောက်ကိုကူးစက်တဲ့ရောဂါ။
၄။ St. Louis Encephalitis စိန့်လူးဝီ ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ။
၅။ Salmonellosis ဆယ်လ်မိုနယ်လိုးဆစ် ခေါ် အစာဆိပ်သင့်ခြင်း။
၆။ E.coli အီးကိုလိုင် ခေါ် အစာလမ်းရောဂါ။
ရေပတ်လည် ဝိုင်းရံလျှက်ရှိသောကုန်းမြေကို ကျွန်းဟုခေါ်သည်။
၂ဝ၁ဝ မှာ မဲပေးမယ့်သူတွေက ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကယ်ဆယ်လျက်ရှိသော တိုင်းပြည်ကို မြန်မာနိုင်ငံဟု ခေါ်သည်။
၂ဝ၁၆ မှာ မြစ်ရေတွေကြီးနေသတဲ့။ တိမ်မည်းတွေ အုံမိုးနေဆဲ။ အပူမီးတွေ ဝိုင်းရံလျှက်ရှိဆဲ။
၂ဝ၁၇ မှာ တုပ်ကွေးဖြစ်နေသတဲ့။ တိမ်မည်းတွေ အုံမိုးနေဆဲ။ အပူမီးတွေ ဝိုင်းရံလျှက်ရှိဆဲ။
အသိဉာဏ်ပညာတွေ ဝိုင်းရံလျှက်ရှိသောကုန်းမြေ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
တစ်လုံး တစ်ဝတည်း ပြည့်ချင်လိုက်တာ၊ ဆရာပေးသော ဆုနှင့် ပြည့်ပါရစေရှင်။
တစ်လုံး တစ်ဝဆိုတာ ပေါ်လစီသတ်ပုံဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲလို မပြည့်ဝတဲ့ အသိကို မရချင်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ လိုအပ်ချက်ကို ပြုပြင်ပေး၍ ကျေးဇူးများစွာပါ။
ကျွန်တော်ခေတ်က သတ်ပုံမှန်အတိုင်းရေးသား စာသင်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကလည်း သတ်ပုံမှန်အတိုင်းသာ ရိုက်နှိပ်တယ်။ ကျွန်တော်က လိုက်နာတယ်။ ကျွန်တော့်စာတွေ သတ်ပုံသဘောမတူလို့ မဖတ်လည်း ကိစ္စမရှိပါ။ ထုတ်ဝေမပေးလည်း စိတ်မရှိပါ။ ကူးယူသူတွေက သတ်ပုံပြင်ရေးကြရင် စိတ်ဆိုးတယ်။ ဆောရီး။ အဲတာက ကျွန်တော့် ပေါ်လစီ။ အစိုးရတွေနဲ့ မတူတဲ့အခါ မတူပါ။
ကျွန်တော်ဆောက်ထားတဲ့ တဲအိမ်လေးပေါ်မှာ လေးလံတဲ့ အုတ်ကြွပ် လာမိုးတာနဲ့တူတယ်။
ဆရာ မင်္ဂလာပါ။ ပြသနာ စာလုံးပေါင်းအမှန် သိချင်လို့ပါ။
ပြဿနာလို့ ရေးပါတယ်။ ပြသ်ဖြစ်တယ်။ ပြဿနာ၊ ပြဿဒါး။ အသံထွက်ရင် ပြသ်သံထွက်ရတယ်။
ဦ ဦး အုံ
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့်​။ စာလုံး​ပေါင်းသတ်​ပုံတခု​လောက်​​မေးချင်​လို့ပါရှင့်။​ အ​ဆောက်​အဦ နဲ့အ​ဆောက်​အဦး ဘယ်​ဟာက မှန်ပါသလဲရှင့်​။
၂။ ဆရာ အဆောက်အဦ၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အဦး ဒီသုံးမျိုးအသုံးကို အမျိူးမျိူးသုံးနေကြတယ်ခင်ဗျ။ ဘယ်လိုသုံးရင် ပိုပြီးဆီလျော်တယ်ဆိုတာ သိပါရစေ။
အဆောက်အဦနဲ့ အဆောက်အအုံတွေက မှန်ပါတယ်။
ဦးမစို (မရှာမဖွေ မတောင့်မတ)
ဦးရင် (နားရွက်နှင့်တကွ ရင်ပတ်၍ပေါင်းသော ခေါင်းပေါင်း)
နောက်ထုတ်သတ်ပုံထဲမှာ အဆောက်အအုံ = ရုံး၊ ကျောင်း၊ အိမ် စသည်။ အဆောက်အဦး = အသုံးအဆောင်၊ ပစ္စည်း စသည်။ အရင်သတ်ပုံစာအုပ်မှာ မတွေ့ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဆောက်အဦးလို့ ဘယ်အရာကိုသုံးသုံး မှန်တယ်မထင်ပါ။
ဥ နှင့် ဉ
စဉ် ရေးတာမှာ စဉ် လို့ ရေးရတာလား စဉ် လို့ ရေးရတာလားဆရာ။
အမှန်အတိုင်း ရေးထား။ ဉာဏ်မှာသာ အဲလိုရေးရ။အဲတာလည်း အရင်ကတည်းက ဥာဏ်လို့လည်းရေးတာရှိတယ်။
ဥတ် = သိစေခြင်း
ဉာဏ = သိခြင်း၊ ဉာဏ်၊ ပညာစေတသိက် (ပါဠိကနေလာ)
ဉာတိ = ဆွေမျိုး (ပါဠိကနေလာ)
ည (မနက်) ၂ နာရီ၊ ၃၆ မိနစ်။
HIV နှင့် ကလေးနို့တိုက်ခြင်း
အရမ်းအရေးကြီးလို့ပါ။ AIDS မိခင်က မွေးပြီးပြီးချင်းမှာ ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်လို့ရမလား။ အခုချက်ခြင်း အဖြေ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
HIV ရှိတဲ့မိခင်ရဲ့နို့ထဲမှာ ပိုးပါနေပါမယ်။ နို့တိုက်မယ် မတိုက်ဘူးဆိုတာ တဦးချင်းကိုကြည့်ဆုံးဖြတ်ရတယ်။ နို့မှုန့်နဲ့ အဆင်ပြေသူကို နို့မှုန့်သာတိုက်စေမယ်။ အဲလိုမဟုတ်ရင်တော့ မိခင်နို့ကိုတိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိခင်ရော ကလေးရော ART ဆေးသောက်ရပါမယ်။ နို့ကို (၆) လအထိသာတိုက်ပါ။
1. Contraceptives for women with STI/HIV လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ HIV ရှိ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကိုယ်ဝန်တားနည်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/contraceptives-for-women-with-stihiv-hiv.html
2. HIV Acute infection ချက်ချင်းဖြစ်လာသော ကူးစက်ရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-acute-infection.html
3. HIV and AIDS by the Numbers http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids-by-numbers_30.html
4. HIV and AIDS drugs (1) ခုခံအားကျရောဂါ ဆေးတွေ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids-drugs-1.html
5. HIV and AIDS drugs (2) ခုခံအားကျရောဂါ ဆေးတွေ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids-drugs-2.html
6. HIV and AIDS http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids.html
7. HIV and Oral practice ပါးစပ်သုံးပြီး ဆက်ဆံတာနဲ့ HIV http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-oral-practice.html
8. HIV asaweapon http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hiv-as-weapon.html
9. HIV FAQ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-faq.html
10. HIV is evolving နှေးလာနေပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-is-evolving.html
11. HIV medicines Side effects (1) ART ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-medicines-side-effects-1-art.html
12. HIV Opportunistic infections အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကူးစက်လာတဲ့ ရောဂါတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-opportunistic-infections.html
13. HIV Prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) မိခင်မှ ကလေးသို့ HIV မကူးစက်အောင် ကာကွယ်ရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/hiv-prevention-of-mother-to-child.html
14. HIV Prevention ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hiv-prevention.html
15. HIV Prevention ကာကွယ်ရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/hiv-prevention.html
16. HIV screening tests http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-screening-tests.html
17. HIV Sexual transmission လိင်ကတဆင့် HIV ကူးစက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-sexual-transmission-hiv.html
18. HIV Summary အတိုချုပ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-cd4-viral-load-and-art.html
19. HIV Tests (1) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-1.html
20. HIV Tests (2) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-2.html
21. HIV Tests (3) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-3.html
22. HIV vaccine ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-vaccine.html
23. HIV ပိုးရှိနေသူတွေကိုပေးနေတဲ့ Truvada ဆေးဟာ ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ ၈၆% နည်းစေတယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/hiv-truvada.html
24. HIV အတွက် Truvada ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-truvada.html
25. HIV ဆေးသစ် Edurant ကို FDA က အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-edurant-fda.html
26. HIV, CD4, Viral load and ART အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-cd4-viral-load-and-art.html
27. HIV/AIDS Myths and Facts http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hivaids-myths-and-facts.html
28. HIV: How it spreads ဘယ်လိုကူးစက်လဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-how-it-spreads.html
29. HIV-AIDS at glance http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-aids-at-glance.html
30. HIV-AIDS links in my new Blog
31. HIV-AIDS ရန်ကုန်ရှိ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သော၊ သွေးစစ်နိုင်သော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/hiv-aids.html
32. How to live with HIV-positive person အတူနေမယ် မကူးစေရ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/how-to-live-with-hiv-positive-person.html
33. Pregnancy and HIV http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hiv-hiv_15.html
34. World AIDS Day ကမ္ဘာ့ (အေ-အိုင်-ဒီ-အက်စ်) နေ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/world-aids-day.html
Flu Viruses Survival တုပ်ကွေးပိုးတွေ ဘယ်လောက်ကြာ အသက်ရှင်နေနိုင်သလဲ
မေးကြတယ်။ ၄-၅-၆ ယောက်မကရှိပြီ။ ဒီမေးခွန်းက အများပြည်သူအတွက် သိပ်အရေးပါတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဆေးပညာအရသာ လိုအပ်တယ်။
လူ့ဝန်းကျင်မှာ ပိုးမျိုးစုံရှိနေတယ်။ လူ့ကိုယ်ပေါ်နဲ့ ကိုယ်ထဲမှာလည်း ရှိနေကြတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဗက်တီးရီးယား၊ ဖန်းဂတ်စ် ခေါ် မှိုပိုး စတာတွေ။ နောက်ထပ်လည်းရှိသေးတယ်။ ပိုးတွေဟာ သက်ရှိတွေဖြစ်လို့ ရှင်သန်ပေါက်ပွါးနိုင်စွမ်းဟာ သူတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ လေ၊ အစာအာဟာရစတဲ့အချက်အလက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး အသက်ရှည် ကြတယ်။
Cold viruses အအေးမိဗိုင်းရပ်စ်တွေက အခန်းတွင်းမျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ ၇ ရက်မကရှင်နေနိုင်တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဗိုပ်းရပ်စ်တွေဟာ အပေါက်မပါတဲ့နေရာမျိုးမှာ ပိုနေနိုင်ကြတယ်။ ဥပပမာ ရေမဝင်နိုင်တာ၊ သံချေးမတက်သံမဏိ။ အပေါက်လေးတွေပါတဲ့ အဝတ်အတည်တွေ၊ တစ်ရှူးတွေမှာ အဲလောက်မရှင်နိုင်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် အသက်သာရှင်နေနိုင်တာကြာပြီး ရောဂါရစေနိုင်စွမ်းကတော့ ၂၄ နာရီလောက်သာရှိပါတယ်။ လူ့လက်တွေပေါ်မှာ ကြာကြာမနေနိုင်ပါ။ မိနစ်တချို့သာနေနိုင်ကြတယ်။ အအေးမိစေတဲ့ Rhinoviruses တွေ ၄ဝ% ဟာ လက်ပေါ်မှာနေတာ တနာရီကြာအထိ ကူးစက်စေနိုင်တယ်။
Respiratory syncytial virus (RSV) ခေါ် ပိုဆိုးတဲ့ အအေးမိစေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတော့ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာ ၆ နာရီကြာရှင်နေနိုင်ကြတယ်။ အဝတ်အစားတွေပေါ်မှာ ၃ဝ ကနေ ၄၅ မိနစ်ကြာရှင်နေနိုင်တယ်။ အရေပြားပေါ်မှာ မိနစ်
Flu viruses တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်
လေထဲမှာ နာရီအတော်များများအသက်ရှင်နေနိုင်ကြတယ်။ အပူချိန်မြင့်တာ မကြိုက်ပါ။ ကလေးတွေကို ချောင်းဆိုးရောဂါတမျိုးရစေတဲ့ Parainfluenza virus အမျိုးအစားက မာတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ၁ဝ နာရီကြာနဲ့ ပျော့တဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ၄ နာရီကြာ ရှင်နေနိုင်တယ်။ ချောင်းဆိုး နှာချေလို့ထွက်လာတဲ့ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ လက်ပေါ်မှာနဲ့ မာတဲ့မျက်နှာပြင်တွေမှာပါ ၂၄ နာရီ ရှင်နေနိုင်ပြီး ကူးစက်နိုင်တယ်။ တစ်ရှူးပေါ်မှာ ၁၅ မိနစ်ကြာ ရှင်နေမယ်။ အအေးမိဗိုင်းရပ်စ်တွေလုပဲ လက်ပေါ်မှာ ကြာကြာတော့မနေနိုင်ပါ။ ၅ မိနစ်နေရင် ကူးစက်နိုင်စွမ်းနည်းသွားပြီ။ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ် အမှုံအမွှားလေးတွေဟာ လေကအအေးဓါတ်ရှိရင် ပိုနေနိုင်ကြတယ်။
Parainfluenza virus ခေါ် ကလေးတွေိကု ချောင်းဆိုးရောဂါရစေတဲ့ဗိုင်းရပ်စတွေက မာတဲ့မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ ၁ဝ နာရီကြာရှင်နေနိုင်တယ်။ မျက်နှာပြင်အပျော့ပေါ်မှာ ၄ နာရီကြာ။
Stomach bugs အစာလမ်းပိုးတွေ
E. coli, salmonella, Clostridium difficile (C. difficile) and campylobacter ဗက်တီးရီးယားတွေနဲ့ norovirus နဲ့ rotavirus ဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ အစာလမ်းပိုးတွေဖြစ်ကြတယ်။ Salmonella နဲ့ campylobacter တွေက ၁ နာရီကနေ ၄ နာရီအထိ မာတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်နဲ့ အဝတ်အစာတွေပေါ်မှာ ရှင်နိုင်ကြတယ်။ Norovirus နဲ့ C. difficile ပိုးတွေ့ ပိုကြာကြာရှင်နေနိုင်ကြတယ်။ လေ့လာမှုတခုအရ C. difficile ပိုးတွေက ၅ လအထိရှင်တာတွေ့ရတယ်။ Norovirus ဗိုင်းရပ်စ်က မာတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရက်တွေကနေ ရက်သတ္တပတ်တွေအထိရှင်နေနိုင်တယ်။ အန်တာထဲမှာ Norovirus ဗိုင်းရပ်စ်ပါနေရင် အမှုံအမွှားလေးတွေ လေထဲရောက်သွားမယ်။ ကျရောက်တဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကနေ ကူးစက်နိုင်တယ်။ ပိုးတွေ အတေ်ာများများကိ ရေနဲ့ ဆပ်ပြာသုံးဆေးကြောတာနဲ့ သန့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်။
Staphylococcus aureus ဗက်တီးရီးယားတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒီအကောင်တွေက မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ ရက်တွေကနေ ရက်သတ္တပတ်တွေအထိရှင်နေနိုင်တယ်။ ရေငွေ့မရရင်လည်း တခြားဗက်တီးရီးယားတွေထက် ပိုပြီးကြာကြာရှင်နေနိုင်ကြတယ်။
နှုတ်ခမ်းနာဖြစ်စေတဲ့ ရေယုံဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ ပလပ်စတစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ၄ နာရီအထိရှင်နေနိုင်တယ်။ အရေပြားပေါ်မှာ ၂ နာရီအထိရှင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းနာကို လက်နဲ့မထိတာကောင်းတယ်။ ထိမိရင် ဆေးလိမ်းပြီးရင် လက်ဆေးပါ။
၁။ လက်ကိုမကြာမကြာဆေးပါ။ အညစ်အကြေးစွန့်ခန်းကအထွက်တိုင်းမှာ လက်ဆေးပါ။ အစာမစားမီ လက်ဆေးပါ။ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေ၊ နှပ်ညှစ်ပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ။
၂။ နေအိမ်နဲ့ ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးပုံမှန်လုပ်ပါ။
၃။ အဝတ်အစားတွေ ပုံမှန် လျှော်ဖွပ်ပါ။ 60C (140F) အထိအပူပေးပြီး ချွတ်ဆေးခေါ် ကလိုရင်း အခြေခံ အဝတ်လျှော်စနစ်နဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ သေပါမယ်။
1. Airborne diseases လေကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/airborne-diseases.html
2. Common cold in children ကလေးတွေ အအေးမိရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/common-cold-in-children.html
3. Common cold prefers cold noses အအေးမမိချင်ရင် နှာခေါင်းမအေးစေနဲ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/common-cold-prefers-cold-noses.html
4. Common Cold အအေးမိရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/common-cold.html
5. Cough Syrups ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrups.html
6. Diarrhea in Children ကလေးဝမ်းသွားရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/diarrhea-in-children.html
7. Diarrhea ဝမ်းရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/diarrhea-and-astrologer.html
8. Face Mask နှာခေါင်းစည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/face-mask.html
9. Healthy culture ချောင်းဆိုး-လက်ဆေး ယဉ်ကျေးမှု https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/healthy-culture_18.html
10. Homemade Humidifier လက်ဖြစ်ရေငွေ့ပေးနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/homemade-humidifier.html
11. How to Purify Muddy Water ရွံ့ရေကို ဘယ်လိုသန့်စေမလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/how-to-purify-muddy-water.html
12. Influenza (Flu) တုပ်ကွေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/influenza-flu.html
13. Medicine for Pneumonias and Respiratory Tract Diseases နူမိုးနီးယားအမျိုးမျိုးနှင့် အသက်ရှူလမ်းရောဂါဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/medicine-for-pneumonias-and-respiratory.html
14. Personal hygiene for women အမျိုးသမီးများ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/personal-hygiene-for-women_19.html
15. Pneumonia in Children ကလေးများတွင်ဖြစ်သည့် နူမိုးနီးယားရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pneumonia-in-children.html
16. Respiratory tract infections (1) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/respiratory-tract-infections-1.html
17. Respiratory tract infections (2) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/respiratory-tract-infections-2-pleurisy.html
18. Respiratory tract infections (3) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၃) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/respiratory-tract-infections-3.html
19. Respiratory tract infections (4) အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း (၄) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/respiratory-tract-infections-4.html
20. Sterilization ပိုးသန့်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sterilization.html
21. Waterborne Diseases ရေကတဆင့်ကူးစက်သည့် ရောဂါများ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/waterborne-diseases.html
ညနေ ၆ နာရီ၊ ၂၄ မိနစ်။
၁။ ကျွန်တော့်အသက် ၁၉ ပါ။ ယောကျာ်းလေးပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ ရန်ကုန်ကပါဆရာ။ တင်ပါး ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ အဆီကျိတ် ဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ ဖြစ်တာ ၂နှစ်လောက် ကြာပါပြီ။ ဆရာဝန်က ကင်ဆာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါပေမယ့် ခွဲမှ အဲဒီ အလုံးက ပျောက်မယ် ပြောပါတယ်။ အခု အကျိတ်က တဖြည်းဖြည်းမာလာပြီး ဖိထိုင်မိရင်တောင် နာလာပါတယ်ဆရာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁လကမှ ဦးလေးတယောက်လဲ ကျွန်တော့်လိုမျိုး အဆီကျိတ်ကို ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ် ကြက်ဥ အလုံးသေးလောက် အရွယ်စားရှိတဲ့အလုံးထွက်လာပါတယ်ဆရာ။ သူက အခုတော့ အနာတောင်ကျက်နေပါပြီ ။ ကျွန်တော်က ကျောင်းသားမို့လို့ ခွဲသင့် မခွဲသင့် စဉ်းစားနေတာပါဆရာ။ ဆက်ပြီး အကျိတ်က ကြီးလာနိုင်သေးလား၊ မခွဲပဲ ပျောက်တဲ့နည်းလမ်း ရှိမလား၊ ဘာကြောင့် အဆီကျိတ်ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာတွေကို ကျေးဇူး ပြုပြီး ပြောပြပေးပါဆရာ။
Yamuna Clinic and Burma Center Prague ယမုန်နာဆေးခန...
Pigeon diseases ခိုတွေကတဆင့် ကူးစက်နိုင်သောရောဂါမျ...
Flu Viruses Survival တုပ်ကွေးပိုးတွေ ဘယ်လောက်ကြာ အ...
Mental toughness စိတ်ဓါတ်
Insecurity အစိုးရပြောင်းပေမယ့် အစိုးမရတွေကမပြောင်း...
Flu တုပ်ကွေး အခြေအနေ
World Hepatitis Day ကမ္ဘာ့အသည်းရောင်ရောဂါနေ့ ဇူလိုင...
ကျွန်တော့် စာမျက်နှာတွေ မဟုတ်ပါ
Neck Glands လည်ပင်း အကျိတ်
Politeness သူများတွေတော့ ယဉ်ကျေးအောင်ကြိုးစားနေကြတ...
The accused တရားခံနိုင်တဲ့ခေတ်
Waxing and Waning လဆန်းလဆုတ် သို့မဟုတ် ပျူစာ၏ဇာတ်သ...
Okara လေးဒီးစ် ဖင်းဂါး
H1N1 ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ဖို့
I got flu ဆရာဝန် တုပ်ကွေးမိခြင်း
Flu News တုပ်ကွေးအကြောင်း
Antibody helps keep HIV at bay for 10 months အင်တီ...
Quality of Life အဆင့်မမီတဲ့ သုတေသနသတင်း
Influenza A (H3N2) Variant Virus ဝက်တုပ်ကွေးတမျိုး...
Gluta ဂလူတာဆေး ခဏခဏမေး
Vitamin D and Flu ဗီတာမင်ဒီ နဲ့ တုပ်ကွေး
Blog ဘလော့မှာ ဖတ်ပါရန်
သျှ သျှင် သျှီ သျှံ သျှာမ် သျှန် သျှိန် သျှို သျှိ...
The New Bronze Age ကြေးခေတ်သစ်
Airborne diseases လေကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ
Side effects တစ်ဒဏ်
Drugs cocktail cut HIV deaths by 27%
South African child virtually cured of HIV တောင်အာ...
H1 N1 တုပ်ကွေးရောဂါ အတည်ပြုချက်ရ သတင်း
H1N1 တုပ်ကွေး သတ်ပုံ
Fordyce spots ရောဂါမဟုတ်တဲ့ အစက်အပျောက်
Swine flu ဆွိုင်းဖလူး ခေါ် တုပ်ကွေးတမျိုး